Dị ka akụ na ụba nke atọ kachasị ukwuu n'ụwa, enwere m ike ịghọta ihe kpatara ị ga-eji nwee mmasị ịbanye n'ahịa ndị Japan. Ọ bụrụ na ị na -eche ka ngwa gị ga -esi banye n'ahịa ndị Japan nke ọma, gaa n'ihu na -agụ iji mụtakwuo maka nke a! Ahịa Mobile Mobile nke Japan Na 2018, ahịa eCommerce nke Japan ruru $ 163.5 ijeri USD na ahịa. Site na 2012 ruo 2018 ahịa eCommerce nke Japan toro site na 3.4% ruo 6.2% nke ahịa azụmaahịa niile. Nchịkwa Azụmaahịa Mba Nile